Home Wararka QM oo sheegtay inay dhaqaale ku bixinayso dib u dhiska suuqa Waaheen
QM oo sheegtay inay dhaqaale ku bixinayso dib u dhiska suuqa Waaheen
Qoraal lagu baahiyay boga Facebook ee hay’adda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in Qaramada Midoobay ay gacan ka gaysanayso dib u dhiska mudada dhow iyo mudada dheer ee suuqa Waaheen ee Hargaysa oo 1-2 April uu dabaabiiyay.
Qoraalka Qaramada Midoobay oo lagaga warbixiyay socdaal uu Ku-xigeenka Wakiilka Xoghaya Qaramada Midoobay, ahna Isuduwaha Qaramada Midoobay iyo Xidhiidhiyaha Arrimaha Bani’aadanimo Adam Abdelmoula, ku tagay Hargaysa, ayaa lagu yidhi “Qaramada Midoobay waxa ka go’an in ay taageerto dib-u-dhiska muddada dhaw, muddada dhexe iyo muddada fog”.
Adam oo booqasho ku tagay suuqa Waaheen ee gubtay, ayaa sheegay in uu soo arkay xaalad burbur ah oo niyad jabisay, waxaanu sheegay in burburka suuqa soo gaadhay aanu ahayn mid la malayn karo, sida Qaramada Midoobay sheegtay.
“Markii aan maanta arkay burburka uu sababay dabkii ka kacay suuqa Waaheen waxay igu noqotay xaalad adag oo niyadjab leh. Heerka burburka uu gaadhay iyo saamaynya uu ku yeeshay dadka iyo dhaqaalaha, si dadban iyo si toos ahba, maaha wax la malayn karo. Si ba’an ayuu magaalada u saameeyey” ayuu yidhi Adam.
Adam wuxu sheegay in dib-u-dhiska suuqa Waaheen ee Hargeysa aad muhiim u yahay, sidoo kalena ay muhiimad weyn leeyihiin qorsheyaasha ka-soo-kabashada si wax looga qabto baahiyaha dadka ugu nugul ee dabku saameeyey, ayaa lagu soo gaba gabeeyay qoraalka xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Previous articleJadwalka doorashada kursigii Fahad asteestay oo bilaabanaya, igasa ooy wali ka xaniban tahay
Next articleKulan looga hadlayay nabadgalyada goobta doorashada guddoonka BFS oo ka dhacay Muqdisho
War Deg Deg ah: Qarax ka dhacay Magaalada Baydhabo
(Dhageyso) Dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay Imaaraadka & Sucuudiga in ay...